စာရေးရမလား၊ ဘ၀ရေးရမလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စာရေးရမလား၊ ဘ၀ရေးရမလား
Posted by စဆရ ကြီး on Sep 26, 2011 in Creative Writing, Think Different | 11 comments
ပြောချင်နေတာ အတော့်ကို ကြာပါပြီ။ မပြောဘူးလို့ ကြံစည်နေတာလဲ ကြာလှပါပြီ။ ဒီနေ့တော့လဲ ပြောချင်ရာကို ပြောလိုက်တော့မယ်။
တစ်ချို့တစ်ချို့သောသူများသည် စာများများရေးသားကြသည်။ စာအုပ်၊ စာပေပေါင်းစုံမှ ကောက်နှုတ်ချက်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၄င်းတို့၏ စိတ်ကူးကွန့်မြူးရာများကိုလည်းကောင်း ရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမှီသဟဲပေါင်းစုံဖြင့် ထုတ်နှုတ်ရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်။ အထောက်အထားကောင်းမွန်မှု၊ စကားလုံး ပြေပြစ်ချောမွေ့မှုကြောင့် ဖတ်ရှူရသူများအဖို့မှာလည်း ရသအပြည့်အ၀ရှိသည်။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သည်လည်း ရသစာပေ အဖတ်များခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုမူ တော်ရုံတန်ရုံဖတ်ခဲသည်။ သူများအကြောင်း စပ်စုရာ ကျသည်ဟု ထင်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်သည်ကား ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မျှသာ ဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကို ကျော်လွန်လာသောအခါ လုပ်ငန်းသဘာဝအရလည်းကောင်း၊ ပညာရှာဖွေခြင်းအရသော်လည်းကောင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုသာ အဖတ်များလာခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖတ်ရှူရင်းဖြင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကျင်လည်ခဲ့ရသော အလွှာပေါင်းစုံအကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသိ၊ မမြင်လိုက်ရသော ခေတ်များ၏အကြောင်း၊ အောင်မြင် ကျော်ကြား၊ ထင်ရှားခဲ့သူတို့၏ သုညဘ၀မှ တန်ဖိုးရှိသော သုညများအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ပုံများကို ဖတ်ရှု၊ အားကျခြင်း ဖြစ်မိသည့်အလျောက် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ထိုသူများကဲ့သို့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိစာများ ရေးသားလိုခြင်း အလျဉ်းဖြစ်မိတော့သည်။ သို့သော် လူ့သဘော၊ သဘာဝမှာ သူလိုကိုယ်လို လူသားတစ်ယောက်၏အကြောင်းကို စိတ်လိုလက်ရ ဖတ်ရှူလိုခြင်းမရှိပေ။ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေးသောသူများမှာလည်း မိမိတို့၏ချို့ယွင်းချက်များကို ဖုံးဖုံးဖိဖိ၊ သူတစ်ပါးတို့၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ပြရေးသား အစရှိသည်တို့ ပါပေမည်။ လူ့သဘာဝမို့ နားလည်ရန်လည်းလိုသည်။
သို့သော် ပေးလိုသည့် စေတနာရင်းကို နားလည်မှုရှိရန်လည်း လိုအပ်သည်။ လူတစ်ယောက်သည် သူ့ဘ၀တွင် ဆရာဝန်လဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့မည်၊ အင်ဂျင်နီယာလဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့မည်၊ ကျောင်းဆရာလဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့မည်၊ အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်များရှိကြပေမည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရာအားလုံးကို လုပ်နိုင်ရန် ခက်ခဲပေမည်။ လက်တွေ့ကျင်လည်ခဲ့ရသူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံများမှ ပျော်ရွှင်စရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာ၊ စိတ်တက်ဖွယ်ရာ၊ စိတ်ဆင်းရဲဖွယ်ရာ အစရှိသည်တို့ကို ဖတ်ရှူခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင် မကျင်လည်ခဲ့ရသော်လည်း ထိုဘ၀များအကြောင်းကို အတော်လေး စေ့စေ့စပ်စပ်သိရှိပြီးသည့်နောက် အကြားအမြင်ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာဖွယ်ရာရှိသည်ဟုမြင်မိသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရသစာပေများကို ရေးသားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ကျွန်တော်သည်ကား စာမရေးပါ၊ ဘ၀သာရေးပါသည်။
ရေးရင်း၊ ရေးရင်းနှင့်ပင် ရေးချင်စိတ်ကုန်ခမ်းလာပါတော့သည်။ လူမှန်၊ နေရာမှန်မရောက်သေးခြင်းကြောင့်ပေလော၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက် မဟုတ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အရေးအသား ပါးနပ်လိမ္မာမှု မရှိခြင်းကြောင့်ပေလောမသိ ဖတ်ရှူသူနည်းလာသည့်အတွက် ဘ၀များ ရေးသားလိုခြင်းမရှိတော့ပါကြောင်းနှင့် စာရေးရလျင်ပဲ ကောင်းလေမည်လောဟု စဉ်းစားရင်း………
ဘ၀ကို စာလိုရေးပေါ့ ကိုရှုံးရယ်။
ရေးချင်စိတ်ပေါ်ရင် ရေးလိုက်ပေါ့ ။ ရေးချင်စိတ်ကုန်ခမ်းလာ ရင် မရေး နဲ.ပေါ့ ။
စာပဲရေးရေး ဘ၀ပဲရေးရေး ၊ရသပဲရေးေ၇း သုတပဲရေးရေး
ဖတ်ရှူသူနည်းခြင်း ၊ များခြင်း ကြောင့်ရေးသားခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရင်
မိမိ ရေးသားလိုသော ဘ၀အကြောင်း၊ ကိုယ်တွေ့များကို အများအား
မျှဝေ ပေးလိုသည့် မွန်မြတ်သော စေတနာ အရင်းခံသည့်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကို မိမိ ကိုယ်တိုင်
ဖျက်ဆီးပစ်ရာ ကျတော့ မှာပေါ.။
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း ဆို သူ့ ရဲ. ”ဘ၀တသက်တာမှတ်တမ်း” ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကြီးမှာ
သူ့ ဘ၀ အကြောင်း မခြွင်းမချန်ရေးပြနိူင်ခဲ့ သေးတာဘဲ။
ကြိုက်လွန်းလို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင် ဖတ်ခဲ့ မိတယ်။ သူပေးချင်တဲ. message ကို လဲရပါတယ်။
သူမှားခဲ. သလို အများမမှားရအောင် သူ့ ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း မှ လူအများ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ဖို့ ပေါ့ ။
သူ့ ရဲ့ အများကို ပေးချင်တဲ့ စေတနာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ တာ ယနေ့ အထိပါ ဘဲ။
ဖတ်ရှုသူ နည်း ခြင်း၊ များခြင်း သည် မိမိဧ။်အရေးအသား ပါးနပ်လိမ္မာမှု ရှိခြင်း မရှိခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါ ဘူး ။
စာဖတ်သူရဲ့ taste (စိတ်ဝင်စား နှစ်သက်မှု )နဲ. သာ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ပါလိမ့် မယ်။
ဓမ္မ ကြိုက်တဲ. သူက ဓမ္မ ၊ ဟာသ ကြိုက်တဲ. သူက ဟာသ၊
သုတ ကြိုက်တဲ. သူက သုတ ၊ ၇သ ကြိုက်တဲ. သူက ရသ၊ သုတ သမား က လည်း သုတ ၊
ဘ၀ ကြိုက်တဲ. သူက ဘ၀ပေါ့ ။ စာဖတ်သူတွေက အလွှာပေါင်းစုံ လေ။ သူ တို့ နှစ်သက်ရာ ရွေးဖတ်ကြ ပြီး ဆွေးနွေးနေကြတာလေ။ သူ့taste နဲ. သူပေါ့ ။
အဓိက က ”ကိုယ် စာဖတ်သူကို ဘာပေးချင်တာလဲ။ ဘယ်လိုပေး မလဲပေါ့ ။”
စာတစ်ပုဒ် ကို ဖတ်လိုက် ရင် စာဖတ်သူ ဟာ စာရေးသူရဲ. စေတနာကို သူ.စာမှာ အထင်းသား ကြီးမြင်နိူင်တာ ဘဲလေ။
ဒါ့ကြောင့်ရေးချင်စိတ်ပေါ်ရင် ရေးသာရေးပါ။ ပေးသာပေးပါ။
စာဖတ်သူက သူယူတတ်သလောက်ရပါ လိမ့် မယ်။အပြည့်အ၀ အားပေးပါတယ်။
***P.S.***ဆ၇ာကြီးလုပ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ စေတနာ ဖြင့် မျှဝေ ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ သည်လည်း ယခုထိ ကြိုးစားနေဆဲ သူတစ်ဦးပါ။
ကို ၇ှုံးက စာေ၇းတဲ့ နေ၇ာမှာပါ ထပ်၇ှုံးချင် နေပြန်ပါပြီ။
ကို ရှုံး က နေ ကို နိုင် လို့ ပြောင်းရင် ပြောင်း၊
ဒါမှမဟုတ် ဦးအောင်မြင် ……….
ကို ရှုံ့ လို့သာ ပြောင်းလိုက်တော့း)
ရှုံး..လူရေ မမှီတော့ အမြဲဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မမှီက ရွာထဲက စာတွေ အကုန်လိုလို ဖတ်ပါတယ်။ တချို့စာတွေဆို ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ပြီးပြည့်စုံလွန်းလို့သော်လည်းကောင်း၊ ထောက်ပြစရာမရှိလို့သော်လည်းကောင်း ဘာမှ ၀င်မပြောပါ။ အချို့အချို့သော စာများဆို ပြောပြချင်စိတ်ကို မရှိတဲ့ စိတ်ပျက်စရာစာတွေ ဆိုလျှင်လည်း ဖတ်ပဲဖတ်ပြီး ဘာမှ မပြောပါ။ ဆက်ရေးပါ အားပေးပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ ကိုယ်မတွေ့ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဖတ်ရတော့ သူများအဲ့ဒီအကြောင်းလာပြောရင် ကိုယ်က သိနေလို့ မအဘူးပေါ့။ မမှီလည်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ သမိုင်း၊ ၀ထ္တုတိုတွေ ဖတ်တာ ပိုအားသန်၊ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ အားမလျှော့ပါနဲ့ ကိုယ့်စာထဲက ဖတ်သူကို တခုလောက်လေးပဲ ပေးနိုင်ရင်တောင် ကိုယ်ရေးရတာ ရေးပျော်ပါတယ်။ မမှီလည်း အတွေးတွေ အများကြီး ရှိပေမဲ့ အခုတလော မအားလွန်းလို့ တပုဒ်တောင် စာမစီနိုင်ဘူး။ ကြာရင် သဂျီးက မေ့တော့မယ်။
တယောက်တည်း ထီးထီး ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။
အစကတည်းက သတိထားပြီး ၀င်ဖတ်ပေးနေပါတယ် အမြဲစောင့်ပြီး အားပေးပေးနေတယ်။
ကိုယ်ရေးသမျှ စာတိုင်း ကို
လူတိုင်း က ကြိုက်မယ် လို့ တော့
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပဲပေါ့ ဗျာ
တစ်ခြား မပြောနဲ့ 
ဘဝ တွေ ရေး တာ အား ပေး တယ် ဗျို့၊ မသိ နိုင် တဲ့ဘဝ တွေ က အများ ကြီး ။
သိ လာ ရ တော့နား လည် ပေး တတ် လာ တာ ပေါ့ ၊
ကဗျာ မ ဆန် ဘူး လို့ထင် ရ ပေ မဲ့၊ ကဗျာ တစ် ပုဒ် ပါ ပဲ့ 
ကိုယ်သိခဲ့တာတွေ… ဒဲ့ အသိပေးလို့လည်းရတယ်..။
ခင်ဗျားက စာရေးအရမ်းကောင်းသူပါ။ ဒီမှာက သုံးရက်တစ်ခါပဲ မီးလာလို့ မှန်မှန် ၀င်အားမပေးနိုင်တာပါ။ များသောအားဖြင့် ဘက်ထရီသုံးပြီး အွန်လိုင်းကြည့်ရတယ်။ ညမီးထွန်းဖို့လည်း ချန်ထားရဦးမယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။